यसरी बनाइयो ऋचा शर्मालाई उत्कृष्ट अभिनेत्री | abc.com.np
यसरी बनाइयो ऋचा शर्मालाई उत्कृष्ट अभिनेत्री
काठमाडौं । जुन वाह्–वाही अभिनेत्री ऋचा शर्माले अहिले पाइरहेकी छिन्, त्यो झुटो हो । टलकजंग भर्सेस टुल्केमा उनको अभियन पनि खासै छैन । गत मंगलबार भएको राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार सम्मान कार्यक्रममा फेरि उत्कृष्ट अभिनेत्री विधामा एक जनालाई मात्र पुरस्कृत गरिँदै थियो । जबकी निर्णायक मण्डलले उत्कृष्ट अभिनेत्रीमा ‘लव यु पापा’ मा सशत्त भूमिका निभाउने बाल कलाकार संगम विष्टलाई भोट गरेका थिए । हुँदै नभएको नाम र विधामा ऋचालाई अवार्ड अर्थात सम्मान दिनुपछाडी कसको हात छ ? छिनभरमा उनको नाम कसरी अवार्ड पाउने सूचिमा थपियो ? प्रसङग रोचक छ ।
इतिहासमै पहिलोपल्ट स्वतन्त्र रुपमा सबै विधामा उत्कृष्ट कलाकार छान्ने प्रक्रिया चलिरहेको थियो । त्ससैबीचमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले निर्णायक मण्डलमा बसेका सञ्चारकर्मी दिपेन्द्र लामाको मोबाईलमा फोन गरे । लामालाई मन्त्री रिजालले संगम विष्टको नाम काटेरै भएपनि उत्कृष्ट अभिनेत्री विधामा ऋचालाई सम्मान दिन भने । मन्त्रीको दबाब थेग्न नसकेपछि सञ्चारकर्मी तथा निर्णायक मण्डलमा बसेका लामाले फोन हाण्डफ्री गरेर सबै सदस्यलाई सुनाए । मिनेन्द्रले एकोहोरो ऋचालाई नै उत्कृष्ट अभिनेत्री अवार्ड दिनुपर्ने अडान लिएपछि निर्णायक मण्डलमा रहेका राजेन्द्र सलब, करिश्मा मानन्धर, हेमेन्त बुढाथोकी, दिपेन्द्र लामा र कपिल पराजुलीले उत्कृष्ट अभिनेत्री अवार्ड विधा संख्या नै दुई बनाएर ऋचाको नाममा पनि लालमोहर लगाईदिए । ‘निर्णायक मण्डलले गरेको निर्णयमा आँच पनि नआउने तथा मन्त्री रिजालको अडान पनि पुरा हुने भन्दै निर्णायक मण्डलले हुँदै नभएको विधा र उनको नाममा उत्कृष्ट अभिनेत्री भन्दै अवार्ड दियो । अब ऋचा शर्मा कसरी भईन त उत्कृष्ट अभिनेत्री ? सञ्चारमाध्याम पनि लहडमै बगे । जहाँ संगम विष्टको नाम र फोटो आउनु पर्ने थियो, त्यहाँ केबल ऋचाको मात्र छापियो । संगम छाँयामा परिन् । उनको कला पनि छाँयामा पर्‍यो ।’–निर्णायक मण्डलका एक सदस्यले भने । यसअघि नै निर्णायक मण्डलकी सदस्य रहेकी अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले आफूले अरुलाई नै भोट दिएको तर उत्कृष्ट अभिनेत्रीमा अर्कैको नाम आएको भन्दै आश्चर्यप्रकट गरिसकेकी छिन् । बरु दोस्रो उत्कृष्ट अभिनेत्री सूचिमा नम्रता श्रेष्ठको नाम थियो ।
किन लिए मन्त्री रिजालले अडान ?
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रिजाल केटीको मामिलामा विवादित मन्त्री हुन् । विगतदेखि नै उनलाई विभिन्न सञ्चारमाध्यामले ‘लेडिज किलर’ मन्त्रीको संज्ञा दिने गरेका छन् । ऋचाको विषयमा मन्त्री रिजालले लिएको अडानले उनीहरुबीचको रहस्यमय सम्वन्धलाई उजागार गरिदिएको छ । सम्वन्ध कस्तो ? कत्रो थियो ? त्यो मन्त्री रिजाल या अभिनेत्री ऋचालाई मात्र थाहा छ । नत्र उनीहरुबीच हुने संवादको कल डिटेल्सबाट मात्र पुष्टि हुन सक्छ । मन्त्री रिजालले यो समाचार निस्केपछि मेरो चरित्र हत्या भयो । मैले निर्णायक मण्डललाई फोन गरेकै छैन भन्ने पनि पक्का छ । त्यो कुराको पुष्टि गर्न पनि निर्णायक मण्डलमा बसेका सदस्यहरुलाई कहाँ–कहाँबाट त्यो दिन फोन आयो ? अनुसन्धान गरे सबै सञ्चारकर्मीलाई खुलस्त हुनेछन । गत बर्ष पनि तीन बर्षको अवार्ड एकैपल्ट वितरण गरेपछि सम्मान कार्यक्रम विवादमा परेको थियो ।
आफ्नै बाबुबाट पनि पीडित
संगम सूचना तथा सञ्चारमन्त्री र ऋचा शर्मा प्रवत्तिले गर्दा मात्र उत्कृष्ट अभिनेत्री संगम विष्ट छाँयामा परिनन्, ‘लव यु पापा’ फिल्मका प्रोडुक्सर आफ्नै बाबुबाट समेत उनी पीडित बनेकी छिन् । जहिले पनि संगमका बाबु गजितले छोरा सौगतलाई मात्र प्राथमिकता दिए । जो ‘लव यु पापा’ फिल्मका निर्देशक हुन् । सञ्चारकै कान्छो निर्देशकका रुपमा चिनाउन उनका बाबुले छोराको लागि के–के मात्र गरेनन् । जुनसुकै कार्यक्रममा जाँदा पनि छोरालाई मात्र लिएर जाने गर्थे । छोरालाई दौरा, सुरुवाल र ढाका टोपीमा सजाएर कार्यक्रममा लैजाने तर छोरीलाई चाहिँ कतै नलैजाने उनको बानि परिसकेको छ । तर तिनै हेलामा परेकी छोरी संगमले आफ्नो कलामार्फत ‘लव यु पापा’ फिल्मलाई पुन: जिवन्त बनाइन्–उत्कृष्ट अभिनेत्रीको अवार्ड पाएर । बास्तममा फिल्म बुझेका धेरैले भन्ने गर्छन–८ बर्षिय बालकले फिल्मबारे कतिनै बुझेको हुन्छ र ? बास्तममा सम्मानकी हकदार त छोरी संगम नै हुन् । जसले गरेको उत्कृष्ट काम जो कोहीले उनको अभियनमार्फत हेर्न र देख्न सक्छ । जनप्रहारबाट